Korojo Media ኮሮጆ ሚዲያ: Sirni Gadaa Hambaa Addunyaa ta 'ee akka Galmaa'uuf Gaaffii Ummata Oromoo irraa Dhiyaate Ture
Aadaa fi muuxannoon uummanni Oromoo walqixxununaa fi aadaa dimokraasii itTatti qabu, fakkeenyummaa kan qabuu fi biyyi keenya Itoophiyaan haadha aadaa dimokraasii ganamaa akka taate addunyaan akka hubatu taasisuuf sirni Gadaa hambaa addunyaa ta 'uun akka galmaa ' u gaaffiin gama uummataatii n dhiyaatc fi galmaa ' uu isaa kan deeggaru ta ' uusaa mallattoosaatiin
Gadaan Sirna siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa ture. Sirni Gadaa Sirna ittiin bulmaataa dimokraatawaa hawaasni matii haala walqixxummaa qabuun kan keessatti qooda fudhatu. Sirni Gadaa uummata Oromoo gosaan yookaa gitaan otoo gargar hin baasiin Gadaa shanitti gurmccssee akka dabaree wal bulchu kan taasisc. Gadaan uummanni Oromoo Gadaa shanan kana jalatti gummayee dabaree darbuun waggaa saddeet saddeetiif kan itti wal bulchu.
Gadaan shanan Booranatti Moggisaa, Sabbaaqaa, Daraaraa, Fullaasaa fi Makkuulaa dha. Gosa Oromoo Karrayyuu biratti Gadaan Shanan Roobalee, Melbaa, Birmajii, Michillee fi Halchiisa . Gosa Oromoo Maccaa fi Tuulamaa keessatti Shanan Gadaa Horata, Michillee, Duuloo, Roobalec fi Birmajiii dha. Sirni kun ij oollee miseensa Gadaa aangoorra jiru irraa, waggaa saddeettan Gadaan sun aangoorra turu keessatti dhalatan, miseensa Gadaa sanaa taasisuun aangoo Gadaa marsaa itti aanu isa waggaa afurtama keessa naanna'ee dhufuuf qophii jalqabsiisu. Ijoollee umuriin isaanii hanga waggaa 8tii ta'e eegalce sadarkaa shan kecssa dabarsee, tooftaa adda addaa fayyadamuun leenjii barbaachisaa ta'e kennuun beekumaa fi safuu hawaasni kun qabu barsiisce, duudhaasaa erga qaabachiiseen booda miseensa sana keessaa watTa ulaagaa armaan gaditti tarreeffamc guutan keessaa ilaalanii angoodhaaf kaadhimu. Sadarkaa jahaffaa irratti filannoo bilisa ta'ccn dandeetti fi beekumsa irratti hundaa'uudhan filatamanii muudamu. Waggaa saddeetiif erga biyya bulchaniin booda sadarkaalee gorsitummaa keessadarbuun hanga dulloomanii jaarsomanitti hojjatu.
Ulaaga Abbaan Gadaa fi Koreen hojii raawwachiistuu ittiin filaman keessaa:
l Namni aangoo Gadaa fudhatu kakuun kakatu waan jiruuf, nama qulqulluu waan yakkaa/cubbuu kan hin hojjanne ta'uu qaba.
l Nam Seera Gadaa fi dubbii jaarsummaa beeku , hariiroo hawaasa naannoosaa waliin qabuun, amanamummaa fi fudhatama kan qabu.
l Nama beekaa, kan dbugaa bin dabsine fi murtii haqaa kennuu danda'u.
l Nama bultii qabu, maatii isaa baala gaaridbaan bulcbu. Kan bojjatee qabeenya itti bulu borate.
l Nama Amala badaa irraa bilisa ta' e, dbugaatii kan hin guddifne, oftuulummaa fi ofittummaarraa bilisa kan ta'e.
l Nama dammaqina qabu, kan ofitti amanu fi ijjannoo cimaa qabu
Sadarkaawwan Gadaan tokko keessa bulluuqu, kudbani. ljoolleen, bara Gadaa abbootasaanii dhalatan waggaa 0-8 Dabballee jedbamu. Kan umurii waggaa 9-1 6 Gaammee xixiqqoo dha. Kan umuriinsaanii waggaa 17-24 Gaammee guguddoo jedhamu. Kan umurii waggaa 25-32 Foollee/kuusaa dha, waggaa 33-40 tti Raaba-Doorii ta'uun sadarkaa shanan keessa hulluuqu . Sadarkaa ja'affaarratti kan waggaa 41-48 Gadaa ta'u. Waggaa afurtama abboonni isaanii aangoo qabatanitti, gadoomanii waggaa saddeetiif biyya bulchu. Bara Gadaasaaniis ijoolleensaanii Dabballee ta'uun marsaa itti aanu jalqabu. Egaa Gadaan shananuu akkanatti dabareedhaan itti darbanii biyya bulchanii dhaloota itti aanutti dabarsu. Miseensonni Gadaa aangorraa yoo bu 'an sadarkaa torbaffaatti ce'anii Luba /yuba lffaa ta'u, waggaa saddeet booda Luba/yuba lammaffaa ta' u, waggaa saddeet booda Luba /yuba 4ffaa ta'u sadarkaa lubummaa keessatti gayeen isaanii gorsa kennuun kan dabe qajeelchuu dba . Sadarkaa Lubummaa keessa fullaa'anii Gadaamoojjii ta'uun waggaa saddeet turaniijaarsa ta ' uun soorama ba'u.
Gadaan Uummata Oromoo maal fayyade?
Aangoon Gadaa ol aantummaa qaamolee murtaa' aniin kan qabame otoo hin ta'in kan dabaree darbuu fi hawaasa hunda kan hinnaachisu ta'uunsaa, Warri gadoomee biyya bulcbu filannoo bilisa ta'een uummataan kan filamu ta'uunsaa, Gadaan tokko waggaa 8 aangorra turee yeroo isaaf murtaaye oggaa xumure, tuuta/garee Gadaa isatti aanutti aangoo karaa nagaatiin kan dabarsu ta'uun isaa, Gadaan tokko marsaa tokko caala filamuu kan hin dandeenye ta'uunsaa, Aangoon siyaasaa karaa nagaatiin garee/tuuta tokkorraa tokkootti kan darbuu ta'uusaa, seerrii Gadaan biyya ittiin bulchu bara Gadaa tokkotti yeroo tokko marii bal'aa taasifamuun ceephoo taasifamuun haala yeroo waliin akka wal simutti kan haaromfamu ta'uunsaa , secra kana waraabbachuuf miseensi Gadaa bakka jiran hundaa kan walitti dhufanii itti amananii waraabbatanii kan galan ta'uunsaa , secra tumamu kana irratti daa'ima waggaa torbaatii qabee hanga jaarsa waggaa torbaatamaa kan irratti hirmaatan ta'uunsaa fi kkf Sirna Gadaa dimokraatawaa ta'uusaa raga ba'u.
Sirni Gadaa diimokraatawaa ta'uunsaa uummanni Oromoo cunqursaa malee bilisoomee akka jiraatu , hariiroo hawaasummaa jabaa kabajaa fi jaalala irratti hundaa' e akka qabaatu fayyadeera . 2. Kabaja Mirga Namoomaa Sirni Gadaa mirga namoomaa ni kabaja. Daa'imni yoo dhalattu birmaduu dha jedha. Birmaduu jechuun dhalootaan bilisa kan ta'e jechuu dha . Sirni Gadaatiin bim1adummaan uumamaan kenname sun hin xuqamu. Kabajni mirga namoomaa kun sabni Oromoo ija wai qixa ta'een akka wal ilaalu fayyadeera . Oromoon gosa tokko keessaa bayee gosa biraa keessa dhaqee yoo qubachuu barbaade, seeraan gaafatee, gosti itti dhaqe sun gosa ofitti moggaasaniit qubachiisu.
Kan Oromoo hin ta 'in illee kooluu yoo gaafate, ofitti fuudhanii, moggaasanii Oromummaa gonfaniifii gosa ofii taasisu. Scera Sirna Gadaatiin Ilmoo namaa ija wal qixa ta'een ilaalamuun isaa Oromoo ol' aantummaa fi gad aantummaa irraa/cunqursaa irraa akka bilisoomu taasiseera. Sirna Gadaatiin mirgi namoomaa kan ecgame ta 'uunsaa hawaasni Oromoo ilaalcha bilisa ta'e akka qabaatu, wal qixxummaa ilmoo namaatti akka amanu , mirga walii otoo hin xuqin ulfinaan akka walitti bulu taasiseera.
3. Kabaja Mirga Dubartootaa
Sirni Gadaa seera mirga dubartootaa ittiin eegu qaba. Seerri mirgi dubartootaa ittiin eegamu kun Seera Siinqee jedhama. Seerri siinqee dubartoonni gurumuu uummatanii mirga isaanii kan ittiin tikfatan yommuu ta' u ulee qalaa , sorooroo qabatanii ba 'anin moggaafama. Siinqeen dubara heerumtuuf gaafa manaa baatu haadhashiitiin kan kennamu yommuu ta'u, jireenya of duraa ishii eegu keessatti mirgashii akka ittiin kabajsiifattuufi. Mirgi dubartii abbaa warraaishiitiinis ta'e nama biraatiin yoo xuqame, mallattoo sagalee ililii, ililii jedhuun wal waamanii siinqeesaanii qabatanii walii birmatanii walii qaqqabu. Dubartiin mallattoo ililfannaa dhageesse hojii of harkaa qabdu battalatti dhiistee siinqeeshii qabattee birmachuuf dirqama qabdi. Qe'eesaanii adiyyootti dhiisanii yeroo deeman kana kan qe'eesaa eeguuf dirqama qabu abbaa warraa dha. Kun ejjannoo mirgasaanii kabajsiisuuf qaban mul'isa.
Dubartoonni siinqee qabatanii dubartii miidhamte sana qaqqabanii, siinqee faarsaa,
miidhaasaanii himachaa gara caffee Gadaatti deemu. Caffeen ulfinaan isaan Sirnatee himannaasaanii dhaggeeffatee, nama mirga dubattii sanaa tuqe, seeratti dhiyeessee adaba.
Dubartoota siinqeedhaan deemanitti dhiirti karaatti yoo dhufe fardarraa bu'ee, ulfinaan nagaa gaafatee, hayyamasaanitiin darbee deema. Akka dhufetti qaxxaamuree yoo darbe, himatamec adabamuu danda' a.
Dubartii siinqee qabattee kophaa deemtutti dhiirti karaatti dhufe ulfinaan dubbisee bira darba . Dubartiin siinqee qabatte deeggarsa ishiin namarraa barbaadde hunda ni argatti. Sababa adda addaatiin maatiin ishii rakkina keessa yoo galee waan fuutu dhabde dubattiin siinqee qabattee warra qabeenya qabu dhaqxee rakkoo na baasaa yoo jette, hin dhabdu.
Sirni Gadaa mirga dubartootaa kan kabaju ta'uunsaa dubartoonni hawaasa keessatti gayec murteessaa ta'e akka qabaatan godheera.
l.Gayee Dubartiin diinagdee keessatti qabdu
Sirni Gadaa keessa gayeen qabccnya bulchuu kan dubartii ti. Dhiirti qotee galchuu, horsiisee tiksuu malee, qabeenya sana kan soorata maatiif ooluu, kan gurguramee soogiddaa fi bunaan bitatan kan murteessu ishii dha. Nama rakkatellee gargaaruu yoo barbaade haadha warraadhaan mari'ata malee akka barbaade gochuu hin danda'u . Dhiitti to'achuu fi itti fayyadamuu irratti gayee dubartoonni qabanitti amanee hin fudhanne fi to' annaa jabeessu qorqoraa jedhama.
Sirna Gadaa keessatti hojiin kabaja guddaa qaba. Namni hojii hojjatus hawaasa keessatti ulfinaa fi jajuu qaba. Guyyaa Dilbataarraan kan hafe gaafti hundi hojii dha. Isumayyuu boqannaa ofiitii malee seerri hojii dhoowwu hin jiru. Aadaan hojii uummanni Sirna Gadaatiin bulu qabu, hojii gamtaa ti. Hojiin gamtaa Gadaan jajjabeessee asiin gaye, Daboo/namni hojii bal'aa qabu, kan qophaatti hojjatee hin dandeenye, waan nyaachaa fi dhugaatii qopheessee, namoota beeku hanga barbaade itti waamee kan hojjachiifatu fi innis gaafa warri isaaf hojjatan isa waammatan dhaqee kan harka itti deebisu. Aadaan hojii kana fakkaatan kan akka daadoo fi wanfalaas jiru garaagarummaan isaan daboo waliin qaban bal'inni hojii fi baay'inni namaa xiqqaachuusaati.
Argaa walii kennuun Seera Gadaa keessatti tooftaa qabeenya ittiin horatanii fi dhalootatti dabarsanii dha. Argaan akkaataa lamaan kennama. Dhiirti dhalatee gaafa guduruu ittiin dhalate irraa buusanii maqaa moggaasaniif argaa kennuuf. Argaanisaa raadalgoromsa tokko, yookaan sana caalas ta'uu mala, warrisaa akka qabeenya qabanitti kennuuf. Raadni/goromsi sun hanga mucaan guddatee fuudha ga 'utti ni horaaf. Gaafa fuu dhu horiisaa sana fudhatee mana ba' a.
Dubri immoo argaan ishii gaafa heerumtu . Warri dhaqxu argaadhaan Sirnatu. Namni fira gurbaa fuudhee ta'e hundi argaa kennu malee ishii hin argu . Warri gurbichaas sa'a tokko handhuuraashii kan ta'e kennuuf. Warri ishiis yoo qabaatan raada/goromsa inuma kennu. Argaa gurbichi
daa'imummaan argaterraa horii horate fi argaa haati warraasaa argatte walitti qabanii jireenyasaanii jalqabatu. Akkanatti qabeenya walii horan.
4.Qabeenya walii qooduu
Sirna Gadaa keessatti namni horii horee sooromee, horiin/loon inni horsiifate kuma yoo guute, hajaa qopheessee biyya waamee kom1a qalee garaacha uffata. Seera kana raawatee ka'ee raada tokkoos lamas hamma inni barbaade loonsaa keessaa fo'ee gadi dhiisa. Raaddeen sana nama rakkataa harka qal'aatu fudhata . Inni qabu isa hin qabneef akka qoodu Sirni Gadaa gargaarera. Warri kana qaqqabe warra kuma gate jedhamu ulfina qabu.
5. Wal gargaarsa
Hawaasni Sirna Gadaatiin bulu aadaa wal gargaarsaa boonsaa qaba. Namni tokko sababa ta'een qabeenyi harkaa barbadaayee yoo hiyyoome, lammiisaa keessaa bayee iriguu hin deemu. Namaa gadi ta ' ee hamiileensaa xuqamu. Lammiin isaa hirphee/ haala buusiitiin kan qabu midhaan qicec kennaaf, kan horii/loon qabu raadaf goromsa kennaaf, kaan jibicha, kaan hoolaa, re'ee, kaan maallaqa kenneefii hirphee deebisee dhaaba . Sirni Gadaa aadaa walgargaarsaa fakkeenyummaa qabus ni qaba.
l. Hawaasa keessatti gayeen dubartoonni qaban guddisuu
1.1 Lola dhaabuu
Sirna Gadaa keessatti aangoon dubartoonni qaban inni kaan lola dhaabuu dha. Lolli gosa keessattis ta ' e gosa garaa garaa gidduutti yoo ka'e kan miidhaan qaqqabu hanga dubmtoonni siinqee qabatanii iddoo sana qaqqabanitti qofa. Dubartoonni siinqee qabatanii iddoo sana akka ga' aniin walakkaa seenuudhaan aangoo seera siinqeetiin kennameef fayyadamuun lola sana battalatti dhaabu.
1.2 Waaqa kadhachuu
Gayeen dubartoonni qaban kaan biyyaaf Waaqa kadhachuu dha. Hawaasni \_Vaaqa
kadhannaadhaa bakka walga'u maratti dubmtoonni dura deemu, kan isaan fundura deemu daa'imman xixiqqoo qofa. Keessattuu yeroo rakkinni dhalate fkn ongeen yoo uumame, dhibeen daddarbaan yoo biyya dhufe fi rakkoo biraallee yoo qaqqabe rakkina akkanaa furu uf, malkaa bu'anii irreeffatanii Waaqa kadhatu. Dubartoonni dandeettii Waaqa araarfannaa akka qaban amanamaa dha.
1.3 Cubbuu baasuu
Seerri hawaasummaa duudhaan kabajamaa Oromoon qabu namoota seeraan ala deemaniin yoo cabe, qoratanii seera cubbuun ittiin ba'uun cubbuu irraa baasanii akka sirratu godhu. Fakkeenyaaf dhiiraa fi dubartii firummaa fuudha dhoowwu walirraa qaban gi dduutti quunnamtiin saalaa yoo uumame warri waan akkanaa raaw'atan akka qaana'anii ti akka dogooggorasaanii irraa baratanitti bakka uummanni wal ga'etti kan raaw'atama.
Sababa adda addaatiin warri dhala dhabuufis Sirni Gadaa mala qaba. Malli kun namoonni dhala dhaban, akka hamiileen hin xuqamne, namni isaan xoom akka hin dhabamnee fi dhaaltuu akka hin dhabne, seera guddifachaa tumce warra ijoollec hedduu borate in·aa ilmoo angafaa kan hin ta'in keessaa filatanii warra dhale kadhatanii guddifatu. Seen·i kun warra dhale ormoomsee warra guddifatu ilmoo taasisaaf. Isaanis daa'ima guddifatan sana akka ilmoo angafaatti il aalanii guddisanii dhaaltuu taasifatu . Guddifachaan seera rakkoo hawaasummaa furu yommuu ta' u, seera hariiroo hawaasaa Itoophiyaa irrattis maqaa kanaan galmaayeera.
2. Kunuunsa naannoo
Akka aadaa Oromootti uumamni naannoo jiru ulfinaa fi kabaja guddaa qaba. Mukecn guguddoo naannoo jiran akka gaaddisa, akka waltajjiitti lakkaa'amu. Ulfinni Odaan argatees kan kanaan wal qabatu. Mukeen akkanaa muruu ni oodatu, ni safeeffatu. Seerri Gadaa ol adeemaan muka bin muru jedha. Namni umurii dargaggummaa keessa jiruuf muka dhaabuu malee muruun hin heyyamamu. Muka jiidhaa hin muran mukti dhimma adda addaaf flm. Ijaarsa manaaf muramuu mal u muka guddina fixate dulloomee, kan hin !anne goguu kajeele dha.Isumaa manguddoon keessaa ilaalanii filanii itti aggaamaniit dargaggootti kennu. Mana keessatti nyaata bilcheeffachuudhaaf kan fayyadaman urraa goggogaa bosona keessa deemanii guurratanii fi kaboota dhoqqee looniin·aa xaxxafanii qoorsan.
Maddi bishaanii/burqaan kunuunsa bosonaan kan wal qabate ta' uusaa hubannoon waan jiruuf kunuunsa addaatu taasifama. Burqaa qofa odoohin taane gabbina lafaatifis eegumsi ni godhama.
Diinagdeen, qooddiinsa lafaa walabaa fi loogii malee mirga bilisummaa dhalootaan argamuun qoodama. Qubannaan gosaan waan ta'eef, miseensi gosa sanaa hundi qixxee kan itti hirmaatu. Margi/citaan horsiisa looniif, itti fayyadaman illee haala dhalootaa fi qubsumaan tajaajila.
Tooftaa lafa ittiin kunkunsan keessaa, lafa qonnaa fi foonaa loonii bara baraan iddoosaa gegeeddaranii qotuun gabbina biyyoo dabaluuftooftaan itti fayyadaman eeruun ni danda'ama.
Sirni Gadaa Sirna hariiroo hawaasa gidduunjiru cimsuu fi tokkummaa uummataa mirkaneessu. Irreechi ayyaanni waggaa waggaatti barii birraa sababeeffachuun Waaqa bacaqii gannaa uummatasaa oofkalchee booqaa birraa qaqqabsiiseef kan galanni ittiin dhiyeeffamu. Irrcechi bakka adda addaatti kan kabajamu ta ' us Sirna ho 'aa fi hirmaannaa bal'aan kan kabajamu kan magaalaa Bishooftuu Hora Arsadii itTatti kabajamu. lrreechi faayidaan inni qabu kan biro , uummata Oromoo bakka tokkootti walitti qabuun akka aadaasaa mul'isu, akka wal gaafatu fi waliif yaadu taasisuusaati. Ayyaana kana irratti, galanni fi abdiin Waaqaa kan ittiin ibsamu keessaa faaruun mareewoo jechuun faarfamu isa tokko.
"Hoo yaa mare woo, mare woo, mare woo
Alaa manaaf nuutolii yaa aayyoolee woo." Hiikaansaa sararri duraa nagaadhaan waggaan mare dhufuuisaa kan agarsiisu yommuu ta 'u, saratTi lammaffaa immoo hawwii fi amantaaWaaqarraa qaban mul'isa.
Sirna Gadaatiin hariitoon hawaasaa kanjibbaa fi gomeen keessatti hin dagaagne sirricha. Gadaan kan wallole ni araarsa. Miidhaan qaqqabe kiisii namaa baasisa. Qabeenyi bade gatii baasisa, yoo lubbuun darbe immoo gumaa baasisuun araara buusa.
Hojiin jaarsummaa irra caala namoota yaada galfatanii qancaraniin hojjatama. Caasaan isaa sadarkaa sadarkaadhaan jira. Sadarkaan jaarsummaa inni ol'aanaa caffee dha. Aadaan araaraa/jaarsummaa Oromoon qabu dhugamTatti hundaa'a. Dhugaa baasaniit, seera Gadaan tumateen murtee kennu. Kun fayidaa Gadaan haala j ireenya hawaasummaa mijeessuu keessatti qabu.
Sirni Gadaa galmee bakka bu'ummaa Yuuneskoo irratti galmaa'uun isaa maal fayyada?
• Gdaan hariiroon hawaasaa akka qajeelu kan hojjatu waan ta'eef jiruu fi jireenyi hawaasaa nagaa fi qabbana kan qabu akka ta'u waan hojjatuufwalitti bu'iinsa fageessec waliigaltcc fi jaalala kan jajjabeessu waan ta'eef aadaan fayidaa qabeessi akkanaa akka beekamuu fi jajjabeeffamu taasisa.
• Aadaan Oromoo addunyaarratti akka beekamu, seenaa fi duudhaaleen ummatichi qabu sadarkaa addunyaatti beekamee akka dhalootatti darbu haala mijaa'aa uuma.
• Aadaan aangoo siyaasaa karaa nagaatiin, eebban dabarsanii kennuun, Oromoon uummata aadaa dimokraasii qabu, uummata ilaalchaan qaroome ta'uusaa wanta ibsuuf uummattoota birootiif fakkeenyummaan isaa guddaa dha.
• Ilaalcha dogoggoraa srma Gadaarra ture mormuun maalummaa Gadaa ifa baasec Oromoon uummata aadaa di mokraasii qabu ta'uusaa ragaadhaan mirkaneessuun dhugaa kana addunyaan akka amanee fudhatu godha .
• Aadaan uummanni Oromoo qabu aaddunyaarratti beeksisee hawwata tuuristii akka ta'u gargaara.
• Bulcchiinsi ammayyaa sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa naannootti jim Sirna Gadaarraa muuxannoo isaan fayyadu bulchiinsa ammayyaa waliin walsimsiisuu akka fayyadaman karaa bana.
Kanafu Sirni Gadaa hambaa addunyaa ta'uudhaan galmee bakka bu ' ummaa Yuuneskoo irratti akka nuuf galmaa' u kabajaan gaafachaa, gama kanaan Abbaan Taaytaa Qorannoo fi Eegumsa Hambaa sochii taasisu hundaaf deeggarsa kan goonu ta'uu keenyaa ibsaa , kakka 'umsa taasisuuf duraan dursinee ni galatoomfanna.